बीमा Archives ~ Page 10 of 46 ~ Banking Khabar
राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेशनल इन्स्योरेन्सको मुनाफामा उल्लेख्य गिरावट
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको खुद मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै कमाएको हो । कम्पनीको खुद मुनाफामा …
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको व्यवसाय सुरु
आइएमई लाइफ इस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले व्यवसाय सुूरु गरेको छ । कम्पनीको व्यवसाय (कारोबार) शुभारम्भ काठमाडौंमा आयोजित एक बिशेष समारोहका बीच बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले गरे । कम्पनीको रजिष्टर्ड तथा कर्पोरेट कार्यालय लैनचौरस्थित हाथवे कम्पेलक्सको पहिल्लो तल्लामा स्थापना गरि कारोवार …
दुई निर्जिवन र एक जीवन बीमा कम्पनी, कुनको वित्तीय अवस्था कस्तो ?
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडर एनबि इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बुधबार गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । निजी क्षेत्रका तीन वटै कम्पनीले खुद मुनाफामा राम्रो प्रगति गरेका छन् । यी तीनमध्ये, नेशनल लाइफको …
नेपाल इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड नाघ्यो
नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा पाँच करोड ५८ लाख रुपैयाँ कमाएको कम्पनीले खुद मुनाफा दोब्बर बढाएको हो । २८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी …
शिखर इन्स्योरेन्सले कमायो साढे ३७ करोड मुनाफा
निजी क्षेत्रको निर्जीवन बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २२ दशमलव ५८ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा …
चार निर्जिवन र दुई जीवन बीमा कम्पनी : गत आर्थिक वर्षमा कुनको प्रगति कस्तो ?
गत आर्थिक वर्षमा अिधकांश बीमा कम्पनीहरुले नाफा बढाएको विवरण सार्वजनिक गरेका छनन् । वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका चार निर्जिवन र दुई जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबाहेक सबैको मुनाफा बढेको छ । निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये, नेको इन्स्योरेन्सको नाफा सबैभन्दा बढी …
बीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर
जीवन बीमा कम्पनीमा हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने भएका छन् । नेपालको बीमा क्षेत्रमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु थपिँदैछ । ती कम्पनीहरुमा उक्त संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सञ्चालनमा आउने तरखरमा रहेका १० कम्पनीमध्ये, तीन वटा जीवन …
नयाँ बीमा कम्पनीहरु व्यवसाय संचालनको तयारीमा
अर्थमन्त्रालयबाट जीवन बीमा व्यवसाय गर्न स्वीकृति पाएका १० कम्पनीहरु व्यवसाय संचालनको तयारीमा जुटेका छन् । जसमध्ये, ६ कम्पनीले बीमा समितिबाट सञ्चालन अनुमति पनि पाइसकेका छन् । आईएमई लाइफ, ज्योति लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले असार २० मा तथा रिलायन्स, रिलायबल …
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्समा जागीर खुल्यो
व्यवसाय संचालनको तयारीमा रहेको आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ब्रान्च मेनेजर तथा मार्केटिङ अफिसर र ट्रेनी एसिस्टेन्ट पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । दुवै पदका लागि कम्पनीले स्नातक गरेको कर्मचारी माग गरेको छ । अनुभवलाई अविार्य नगरिए पनि अनुभवीलाई प्राथमिकता …
नयाँ बीमा विधेयकमा के छ ? (रिपोर्टसहित)
सुष्मा थापा – जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक तीन महिनापछि संसधमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो विधेयकका रुपमा स्वास्थ्य बीमा विधेयक संसधमा प्रस्तुत गरेका हुन् …